Semalt Expert: Maninona no Miala Amin'ny Mainty Hatao SEO?
Ny fikasan'ny olona tsirairay izay manana na manangana tranonkala iray mba hananana tanjona iray. Tsy misy iray amin'izy ireo ny mahazo ny sazy ara-dalàna sora-pikarohana . SEO dia manana lafiny tsara sy maizina. Ao anatin'ireo fomba fanao SEO izay manaraka ny fitsipika dia ny famoronana votoaty mahafa-po sy mora hita izay mahafeno ny filan'ny mpihaino iray.
Ny lafiny mainty avy amin'ny SEO dia ahitana fomba amam-panao fantatra amin'ny anarana hoe "hatavy mainty". Anisan'izy ireo ny hetsika tsy mendrika rehetra izay manampy amin'ny fandefasana tranonkala ambony amin'ny SERP. Ireo olona tafiditra amin'ny teknikan'ny mainty mainty dia miezaka manapaka ny zorony mba hahazoana fifamoivoizana tsy mendrika.
Igor Gamanenko, manam-pahaizana ambony indrindra avy amin'ny Semalt Digital Services, dia manoritsoritra azy ireo toy izao manaraka izao:
Tsy manaraka ny fitsipika sy ny fitsipika
Ny traikefan'ny mpampiasa mahantra
Ny fampisehoana tsy ara-tantara ny votoaty amin'ny fomba hita maso sy tsy hita maso
Tamin'ny voalohany, ny ankamaroan'ny zavatra heverina ho karazana mainty hoditra dia heverina ho fomba ara-dalàna mba hahazoana fifamoivoizana sy laharana ambony ao amin'ny SERP. Raha tsy fantatra ny fiarahamonin'ny SEO fa ny fampiasana azy ireo dia mametraka tranokala sy marika atahorana..Manimba ny toetra ankapobeny ilay tranonkala sy ny maha-zava-dehibe azy amin'ny pejy valin'ny fikarohana. Ny tombony amin'ny fampiasana teknolojia mainty hoditra dia maharitra ary manome tombony be loatra. Ankoatra izay, raha hita fa mampiasa teknika toy izany ny tompon'ilay tranonkala, ny tadiavin-dry zareo dia manasazy ny tranonkala na mandà azy tsy hiseho amin'ny valin'ny fikarohana (izay tsy fahita firy). Ny sazy dia manana fiantraikany ratsy amin'ny fizotran'ny fikarohana sy ny loka. Ny paikady mainty hoditra dia manome vahaolana fohy amin'ny olana momba ny raharaham-barotra rehetra misy ankehitriny, izay manome lanja ny mpanjifany amin'ny fototra tsy tapaka amin'ny ho avy.
Manoro hevitra ny manam-pahaizana momba ny SEO amin'ny fampiasana ny iray amin'ireto fomba manaraka ireto hahazoana fifamoivoizana amin'ny tranokala:
Anisan'izany ny isan'ny teny fanalahidy avo lenta ao amin'ny votoatin'ny tranonkala mba hampitomboana ny fahitana sy ny fahafahana miseho amin'ny valin'ny fikarohana amin'ny fangatahana maromaro. Raha manao izany izy, dia mahatonga ny votoaty tsy araka ny natiora, ary rehefa mahita izany ny milina fikarohana, dia mamely ny tranonkala izy ireo satria manelingelina ny tanjon'ny fitaovana fitadiavana ny mpampiasa.
Soratra tsy hita
Ny teknika dia midika fametahana andian-teny maromaro amin'ny fotsy fotsy, ka mahatonga azy ho tsy mahita ireo mpitsidika. Na izany aza, ny fotsy hoditra dia mahafantatra fa hahita azy ireo sy hahita ny endriky ny mpitsikilo ny tranonkala, ka ny sehatra dia miseho amin'ny pejy valin'ny fikarohana. Ireo mpampiasa dia tarihin'ny pejy fotsiny mba hahitanao votoaty tsy misy dikany ary noho izany, ny traikefa mahantra.
Ireo pejy sandoka sandoka ireo dia manolotra ny fonosana sy ny mpampiasa manana votoaty sy adiresy. Miezaka manamboatra ny motera fikarohana izy ireo mba hiorina amin'ny toerana avo kokoa.
Ny tetikady mainty hoditra, na dia tsy misy dikany aza, dia tena maka fanahy ary tena azo takarina satria misy vokany fohy. Na izany aza, raha fantatra ny tranonkala, dia tsy maintsy mandany fotoana betsaka kokoa izy ireo, na ratsy kokoa aza, voarara amin'ny SERPs Source .